Izandla ze-enkulisa: izithombe zasebusika-izicelo ezivela koboya bekotini, isigaba somfundi nesithombe
Imisebenzi yonyaka omusha enkulisa: isithombe-appliqué kusuka koboya bekotini
Isigaba samakhosi isinyathelo ngesinyathelo sizokutshela indlela yokwenza izinhlelo ezinhle zasebusika ezivela kuma-discs discs.
Isicelo sisebenza kahle futhi ngesikhathi esifanayo indlela ethakazelisayo kakhulu yokuthuthukisa amakhono amancane amakhono ezandla nezengqondo. Futhi uma kule nkathi efudumele ukuba uhlale etafuleni, akulula kakhulu, ngakho-ke izinsuku zokubanda zasebusika njengesifundo esijabulisayo sizamukeleka kakhulu. Ngakho-ke, sikunikeza amakilasi amabili enhloko ngesihloko: "appliqué kusuka koboya bekotini - izithombe zezingqikithi zasebusika."
Faka isicelo kusuka koboya bekotini: isithombe sasebusika, isigaba somsebenzi wesithombe
Lolu hlelo luhlanganisa ukulula kokusebenza, ukutholakala kwezinto zokwakha kanye nobuhle bokwakheka, ngakho-ke kuphelele kakhulu emisebenzini yezandla zezingane.
ikhadibhodi eluhlaza okwesibhakabhaka noma eluhlaza okwesibhakabhaka (okungcono - iholoholo);
Imfundo yesinyathelo-nge-step yokudala isithombe sasebusika kusuka kuma diski ezithombeni:
Siqala ukwenza isithombe sasebusika se-appliqués esenziwe ngoboya bekotoni kusuka emthini omhlophe wezingane. Sizoyibeka emakhadibhodi eduze komngcele ongakwesokunxele. Njengomgqomo kuye, sikhetha u-wand owodwa wekotoni, nomqhele weqhwa uzosebenza njenge-discton wool disc. "Tshala" isitsha sethu ngekhadibhodi ne-glue.
Sinqamula ama-disks amaningana ngesigamu futhi senze izinkomba ezivela kulezi zincenye, sizifaka emaphethelweni angaphansi kwekhadibhodi.
Kunzima ukucabanga isithombe sasebusika ngaphandle kwesihlahla sikaKhisimusi. Ngakho-ke, lesi sihambeli sehlathi sizoba sesicelo sethu. Ukuze ukwenze, ukugoba uboya owodwa kotini, udwebe umuthi wesihlahla sikaKhisimusi kuwo bese uwuqeda. Sifaka umsebenzi wokusebenza bese siwuhlanganisa phakathi kweqhwa leqhwa eduze kwesihlahla seqhwa.
Manje, kusukela enqenqemeni yediski e-wadded, sinciphisa inyanga encane ngesisindo, futhi kusukela ezinxenyeni ezincane zoboya bekotini senza ama-snowflakes (noma izinkanyezi - esizithanda kakhulu). Sihlanganisa lezi zingxenye zesithombe kukhadibhodi nge-glue - futhi indawo yasebusika ilungile!
Isiqhwa se-Snowman esenziwe ngoboya bekotini, isigaba somsebenzi ngesithombe
Isihloko sasebusika asikwazi ukukwenza ngaphandle kweqhwa leqhwa - i-hero njalo yezindaba zonyaka omusha kanye nomhlali wamagceke agcwele amaqhwa.
amakhadibhodi enemibala (okwesibhakabhaka, isiliva nomnyama);
ubuhlalu (i-pair of black and one red);
izinkinobho ezincane (ezintathu);
igatsha lomuthi (omncane).
I-step-by-step instruction yokwenza i-snowman
Lungiselela ifreyimu yesithombe sethu sekhadibhodi yesiliva (grey). Ukuze wenze lokhu, vula ishidi lekhadibhodi bese udweba umugqa phezu kwalo, uphinde uhambe u-2 cm kusuka enqenqemeni ngalinye. Amakhonksi amabili kulolu tlelane ahlangene - ngakwesokudla nangaphezulu kwesokunxele. Sika phakathi kwekhadi lekhadibhodi. Uhlaka olulandelayo lufakwe eshadini lekhadibhodi eluhlaza okwesibhakabhaka, okuyinto ezoba yisisekelo sohlelo lokusebenza.
Ake siqhubeke neqhawe lesicelo - i-snowman yethu eyenziwe ngoboya bekotini izoba nezingxenye ezinhlanu: ikhanda, izandla ezimbili, isiqu kanye nengxenye ephansi. I-disk ezosetshenziswa njengekhanda, yenza kancane kancane ububanzi bese unqamula umkhawulo owodwa eceleni kwe-arc ukuze ugweme ithanga nge-trunk. Futhi, yenza nge-trunk, unqume umkhawulo ukuze ungatholi ingxenye engezansi. Ama-Disks, esingazenza ngezandla ze-snowman, asike ngaphezu kuka-3 cm ububanzi.
Usebenzisa i-glue, gcoba zonke izikhala ze-snowman kuya ekhadini bese umenza ibhakede-ibhakede lamakhadibhodi amnyama. Ukuze wenze lokhu, unqume i-trapezium kusuka ekhadini eliphakathi ubude obuyi-5 cm no-vertex we-3 cm bese uyifaka enhloko ye-snowman ne-PVA glue.
Nge-glue "Isikhathi" sihlanganisa ubuhla obumnyama ngamehlo ekhanda lomuntu weqhwa, i-bead ebomvu - ngesimo sempumu kanye nebhokisi esiqu.
"Sibeka" i-snowman ephuma kuma-discs cosmetic discs eqhweni, eyenziwe ngezicucu zoboya bekotini, kwesinye sezandla "faka" umshanelo osuka ehlathini.
Uma ufisa, unganika lo mdwebo wesithombe sasebusika ngesimo sesithombe, okwenza ohlangothini oluphambene namacici amabili wephepha bese welula phakathi kwabo ngentambo yokubopha.
Amagama wabafana abazalwa ngo-2016: indlela yokukhetha igama elihle lomntwana?
Indlela yokuhlela i-prom in ekilasini 9
Izinhlamvu ezihle kakhulu nezithinta kakhulu ku-Santa Claus ezinganeni
Imithetho eyinhloko yocansi lokuqala lentombazane
Kusihlwa kwakusihlwa kokuhlelwa kabusha
Uhlobo olusha lwe-flower-citrus oluvela eStella McCartney
Indlela yokufundisa ingane indlela yokuphatha kahle imali
Ukukhula nokuthuthukiswa kwengane kuze kube unyaka
Izimfihlo zokuhlanza kahle